Mubatanidzwa weMDC Alliance wakabanatidza VaMorgan Tsvangirai, VaTendai Biti naVaWelshman Ncube
Komiti yepamusoro yebato rinopikisa rePeople’s Democratic Party, PDP, rinotungamirirwa naVaTendai Biti nemusi weChishanu yakaita musangano wakakosha wekugadzirisa makakatanwa ekupinda kwebato iri mumubatanidzwa weMDC Alliance, ayo anonzi anga oda kutsemura bato iri nepakati.
Musangano we Management Committee uyu waitirwa kuGweru.
Mutauriri wePDP, VaJacob Mafume vanoti musangano wavo wafamba zvakanaka chose sezvo mutungamiri webato ravo VaBiti, sachigaro webato pamwe nemunyori mukuru, vatora mukana uyu kutsanangurira nhengo dzekomiti iyi pasvika nhaurirano dzemubatanidzwa.
Vanoti vajekesawo pamusoro pemashoko emanyepo avanoti anga achitenderedzwa nevanhu pamadandemutande ane chekuita nekupinda kwebato ravo mumubatanidzwa.
Svondo rino mutevedzeri wemutauriri webato iri, VaGeorge Mkwananzi vakanyorawo gwaro raishoropodza VaBiti richiti vakaita hurukuro dzinosimudzira hutungamiri hwekuHarare chete vasingatarisewo vamwe vekune matunhu ari kunze.
Asi VaMafume vanoti vanhu vanga vachigunun'una vanga vasina ruzivo rwemafambiro ari kuita nhaurirano idzi.
"Kugunun'una kwaa kuri kubva pakuti vanhu vanga vachifungira kuti pane chibvumirano changa chakaitwa chinovakanganisa. But zvazobuda pachena kuti pane makuhwa nemashoko anga achitaurwa neve social media, nevamwe vakadero vanga vachida kungoputsa ukama," VaMafume vanodaro.
Matambudziko aya ari kutarisanawo nebato reMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai, uko humwe hutungamiri hwakasarudza kusaenda kumusangano wekusaina chibvumirano ichi senzira yekunyunyutawo.
Mamwe mapato ari mumubatanidzwa uyu anoti MDC neZanu Ndonga anonzi akatarisanawo nematambudziko edzimwe nhengo dziri kuramba kupinda mumubatanidzwa uyu.
MDC Alliance ine mapato manomwe anosanganisira Transform Zimbabwe, Zimbabwe People First, neMulti-Racial Christian Democratic Party.